The Thamelean 505 days ago
sexy in haku patasi 504 days ago
Visitor is reading Working Offshore - International Student
Visitor from US is reading तिम्लाई शीदा पनि बिदा पनि
Visitor is reading updates on retrogression--nursing
Visitor from US is reading Sajha H1b experts, plz help me
Visitor from DE is reading ABC TREK - Cinematic video
Visitor from US is reading Next Bollywood Hangama Mimoh Chakraborty
Visitor is reading Monsoon Engagement : A short story
Visitor from DE is reading We trekked Annapurna Base Camp. Here'sahour long video
Posted on 06-08-20 4:29 PM Reply [Subscribe]
जाने निर्णय गरेछौ, we will miss you. तर टिमीले अति गरेर ल्यायो पासा । अटी गरे पछि खटी हुन्छ । टिमी अर्को UW नबन भनेर टिमी लाई मैले सुरु देखि भनेको हो । टिमीले कसै लाई पनि मान्छे गन्दैन , सबै संग ऋष राक्छ टिमी । मिलेर बस्न सक्दैन, खाली सुरुवालको कथा भन्छ । जे कुरामा नि जान्यचा हुनु पर्छ टिमी ।
लामो लामो बुज्दै नबुज्ने कथा लेखेर ल्याउछ । घरको काममा भाबी लाई ग्वाली गर्दैन, खाली साझामा मात्र झुन्डिन्छ, कैले कमेन्ट चोर्यो भनेर करौछ, कैले कसले गाली गर्यो भनेर करौछ , आफ्नो काम त आफै सम्हाल्नु पर्छ पासा येत्रो बुढो भएर ।
म तिम्रो दुश्मन होइन पासा, आज टिमी जादा म ज्यादै दुखि छु, सायद टिमी प्रति मेरो सहनाभुती भएर होला टिमी लाई कसैले गाली गर्दा मलाई नराम्रो लाग्थियो । टिमी लाई त्यो UW ले कति ओटा ID बनाएर तिम्रो मजाक उडाउडा मैले तिम्रो साथ दिएर कति चोटी त्यो संग लड्यो, टिमी सम्जि त । टिमीलाई सबैले लाटो, गाड़ो भन्दा मलाई कत्ति चित्त दुख्यो किनकि म पनि टिमी जसतै छ पासा ।
टिमी लाई मैले कति चोटी साझामा कथा नलेख, तिम्रो कथा कसैले सुन्दैन बरु तिम्रो बिल्ला हन्छ भनेर भन्यो सम्जि त पासा । टिमी ले कैले मेरो कुरा सुनेन बरु मलाई बाऊचा आदि इत्यादी भनेर भन्यो ।
मैले टिमी लाई कसैले गाली नगरोस भनेर कथा नलेख भनेको हो । टिमी लाई यहाँ बाट बिदा गर्दा दुखि भए नि यहाँ बाट गए पछि तिम्रो भबिस्य राम्रो हुने देखेर म खुसि छु पासा । यहाँ दिने फाल्तु समय घर को काम मा दे पासा , बच्चा लाई घुमाउन लैजा, भाउजु लाई काममा सगा येसो सानो तिनो काम खोजेर काम गर, २ ४ पैसा आउछ । अनि हेर जिन्दगि कति खुसि छ , जिन्दगि साझा भन्दा बाहिर नि छ पासा ।
त कथा नलेखे पनि हाम्रो क्रियाकलाप चै आवलोकन गरि राख है , केहि भन्न मन लागे thread मा कमेन्ट गर हामी replay फर्कौछौ। पुरै माया चै नमार है पासा । त जहाँ भए पनि हामी तलै सम्जि राख्ने छौ, कैले कहिँ तेरो पुरानो कथा खोलेर हेरौला तेरो सम्झना आए पासा । मेरो नि अर्को रुप छ पासा यो साझामा म पनि कुनै दिन यो रुप छोडेर पुरानै रुप मा जान्छु ।
आशा छ कहाँ सूना माफ हुने छ ।
ओए पासा अनि सुन त, तलाई येस्त्रो माया स्नेह साथ बिदा गरियो, तर मनमा कता कता त फेरी २ ३ घन्टामै फेर्केर औछस जस्तो डर नि लागि राको छ। सुन, बिदा गरि सके पछि फर्केर आउनु हुन्न अपसगुन हुछ । त त्यो UW जस्तो गिरेको नबन ल , जत्ति डाडा कटाए नि फेरी फर्केर लुते कुकुर जस्तो आउने । इख नभाको मान्छे बिख नभाको सर्को जस्तो हो कसैले गन्दैन। के गर्नु छोरि चेलीको जात जति माइत बसे नि डाडा काट्नै पर्छ । माईति को न्यास्रो लागे कैले कै तीज , पूजामा येसो झुलुक्क आउनु ।
Posted on 06-08-20 9:15 PM [Snapshot: 110] Reply [Subscribe]
धात्थाये ख ला, पासा? त्वता ये वनेगु ला....?
Posted on 06-09-20 1:17 AM [Snapshot: 177] Reply [Subscribe]
मुजीको घैंटाँ घाम लागेछ, बधाई छ सबैलाई!
अब तोर्पे, महामुर्ख, नार्सीसिस्ट चिक्नेहरुबाट साझाले मुक्ति पायो भनेसि मेरो (अनि मेरा अवतारहरुको) काम छैन यहाँ, म आफु पनि निस्किन्छु अब। यो मुजी लोगने अनि बेबीडिक जास्ता अराजक तत्वहरुको एक्सोडसमा केहि भुमिका खेल्न पायेकोमा खुसि छु।
लास्टाँ फेरि एक्चोटी भन्नै पर्योः म अन्डर्वेर हैन, यि Bir_Nepali देखी iogan सम्म चाई मेरा अवातर हुन र म सगैं यिनिहरु पनि हाईबर्नेसनमा जानेछन अर्को लट तोर्पेहरुको बिग्बिगि नहुन्जि। ल बाई-बाई!
@ठमेलीयन ब्रो यो हाकुचा फेक नेवार हो, बुझ्दैन येस्ले।
Posted on 06-09-20 7:54 AM [Snapshot: 238] Reply [Subscribe]
म, lovely _ heart पनि अब बिदा हुन्छम ,खासमा मैले अन्डीजी लाई औकात देखाउन यो रुप लेको हो । मेरो कविता लाई nursery rhyme भन्नु भो तेइ भएर वहाको नारी छामुम भनेर हो । लोगनजी संग भिड्ने कुनै सोचाई थिएन वहा नै हेरो बन्न आउनु भाको हो। वहा अर्को UW बन्ने चुरीफुरी देखेर अलिकति पेलेको वहा knock out हुनु भो । तपाई फेरी आए पनि आपति छैन। यो बीच मलाई हौसला र प्रेरेना दिने fromdallas जी र अरु लाई धन्यवाद ।
UW को चुरीफुरी बढे मात्र आउने छु ।